Apple dia namoaka ny fanavaozana ny firmware 3E756 ho an'ny AirPods Max | Avy amin'ny mac aho
Volana roa taorian'ny fanavaozana farany dia namoaka kinova firmware vaovao ho an'ny AirPods Max ny orinasa amerikana. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra izay nampiana na nesoriny. Na raha tsy vitany ny iray na ny iray hafa. Ny mazava dia izao, miaraka amin'ny Spatial Audio, izay efa fantatsika fa mandaitra, dia azo inoana fa ho raharaha fotsiny ny hahazoana fanatsarana ny lozisialy. Na izany na tsia efa manana ny kinova 3E756 miaraka aminay izahay.
Apple dia namoaka rindrambaiko fikirakirana 3E756 ho an'ny AirPods Max. Teo aloha, ny kinova firmware dia 3C39. Ka raha misy izany dia somary lava kokoa ilay kinova firmware. Raha ny momba ny vaovao, na izany aza, araka ny voalaza etsy ambony, izany no mbola ho hita. Apple dia tsy mamoaka naoty famoahana ho an'ireo karazana fanavaozam-baovao. Noho izany mijanona ho mistery amin'ity indray mitoraka ity.
Mihoatra noho izay azo atao ny miresaka olana fototra i Apple izay nisedra mpampiasa maro ary nanjary nalaza be. Azo atao ihany koa ny tanjon'ny Apple hanamboatra olana hafa na hanatsara ny hafa. Na dia fanatsarana kely fotsiny sy fanatsarana fiarovana aza. Ny mahazatra sy mahazatra amin'ny fanavaozana fototra.
Matetika ny fanavaozana ny AirPods dia vita ho azy, saingy marina fa azo terena kely izy io. Mila mampifandray ny AirPods Max amin'ny iPhone na iPad fotsiny ianao dia mandehana Fikirana -> Ankapobeny -> Mikasika -> AirPods. Ho hitanao eo hoe iza ny kinovan'ny findainao ary angamba amin'izany no angatahinao alaina izao ny kinova vaovao. Saingy ho zavatra vita izany nefa tsy tsapanao akory.
Miandry izahay raha sanatria ka misy vaovao tokony holazaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia namoaka ny fanavaozana ny firmware 3E756 ho an'ny AirPods Max
Notsapainay ny Sonos Move, mpandahateny tokana
Apple dia manomana kinova fanavaozana ny Mac Pro miorina amin'ny Intel